ဘီယာသည် စားသောက်ကုန် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ကျယ်ပြန့်စွာသုံးစွဲနေကြသော စားသောက်ကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်။ အယ်လကိုဟော ပါဝင်သည့် အဖျော်ယမကာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမှာ ရေနှင့် လက်ဖက်ရည် ပြီးရင် တတိယမြောက် အသုံးပြုဆုံး စားသောက်ကုန်လည်း ဖြစ်သည်။ ဘီယာတွင် အယ်လကိုဟော ပါဝင်နှုန်း ၄%မှ ၇%ထိ ထည့်သွင်းထားလေ့ရှိသည်။
အချဉ်ဖောက်ထားသော သီးနှံအစေ့အဆန်များမှ ပြုလုပ်ထားသော အရက်သေစာ
ဤဆောင်းပါးသည် အရက်သောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။  အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက် Beer ( disambiguation) ကို ကြည့်ပါ။
ဘီယာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး သောက်သုံးသည့်အရက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေနှင့် လက်ဖက်ရည်ပြီးနောက် တတိယလူကြိုက်အများဆုံး သောက်စရာဖြစ်သည်။  အဓိကအားဖြင့် စီရီရယ်အစေ့အဆန်များ—အများစုမှာ ဂျုံစပါး၊ ပြောင်းဖူး (ပြောင်းဖူး)၊ ဆန်နှင့် oats တို့ကိုလည်း ချက်လုပ်ခြင်းနှင့် အချဉ်ဖောက်ခြင်းတို့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။  ဘီယာချက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ wort ထဲတွင် ကစီဓာတ် သကြားများကို အချဉ်ဖောက်ခြင်းသည် ထွက်ပေါ်လာသော ဘီယာတွင် အီသနော နှင့် ကာဗွန်နီယမ်ကို ထုတ်ပေးသည်။  ခေတ်မီဘီယာအများစုသည် ခါးသီးမှုနှင့် အခြားအရသာများကို ပေါင်းထည့်ကာ သဘာဝအတိုင်း တာရှည်ခံပြီး တည်ငြိမ်အေးဂျင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ဟော့ပ်များဖြင့် ချက်ထားသည်။  ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ သို့မဟုတ် သစ်သီးဝလံများကဲ့သို့ အခြားသော အနံ့အရသာအေးဂျင့်များကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များအစား ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များအဖြစ် ထည့်သွင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။  စီးပွားဖြစ် ချက်လုပ်ရာတွင် သဘာဝ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု အာနိသင်ကို မကြာခဏ ဖယ်ရှားပြီး အတင်းကာဗွန်နိတ်ဖြင့် အစားထိုးပါသည်။
လူ့လောက၏ အစောဆုံးသော အရေးအသားအချို့သည် ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်- ဘီယာဆိုင်များနှင့် ဘီယာဆိုင်များကို ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများ ပါဝင်သော Hammurabi နှင့် "The Hymn to Ninkasi" ၊ ဘီယာနတ်ဘုရားမထံ ဆုတောင်းသည့် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားနတ်သမီးထံ ဆုတောင်းချက်၊  စာတတ်သူနည်းပါးသော ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင် ဘီယာချက်နည်းကို မှတ်မိသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘီယာကို ပုလင်းများနှင့် ဗူးများတွင် ဖြန့်ဝေထားပြီး အထူးသဖြင့် အရက်ဆိုင်များနှင့် အရက်ဆိုင်များတွင်လည်း အကြမ်းအားဖြင့် ရနိုင်သည်။  ဘီယာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည် ကြီးစိုးသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီအများအပြားနှင့် brewpubs မှ ဒေသတွင်း ဘီယာချက်စက်ရုံများအထိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အသေးစားထုတ်လုပ်သူများ ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။  ခေတ်မီဘီယာ၏အစွမ်းသတ္တိသည် အများအားဖြင့် 4% မှ 6% အယ်လ်ကိုဟောပမာဏအလိုက် (ABV) ဝန်းကျင်တွင် 0.5% နှင့် 20% အကြား ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း အချို့သော ဘီယာချက်စက်ရုံများသည် 40% ABV နှင့်အထက် ဥပမာများကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဘီယာသည် နိုင်ငံများစွာ၏ ယဉ်ကျေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ဘီယာပွဲတော်များကဲ့သို့သော လူမှုရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး အရက်ဆိုင်များတွင် တွားသွားခြင်း၊ အရက်ဆိုင် ပဟေဠိများနှင့် အရက်ဆိုင်ဂိမ်းများကဲ့သို့သော ကြွယ်ဝသော အရက်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
ဘီယာကို ပေါင်းခံသောအခါ ရလာသောအရက်သည် ဝီစကီပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ကြည့်ပါ- Ale § ဇာနည်ဗေဒကိုလည်း ကြည့်ပါ။
အင်္ဂလိပ်ဟောင်း- Beore 'ဘီယာ'
အင်္ဂလိပ်၏ အစောပိုင်းပုံစံများနှင့် စကင်ဒီနေးဗီးယားဘာသာစကားများတွင်၊ ဘီယာ၏ပုံမှန်စကားလုံးမှာ ခေတ်မီအင်္ဂလိပ်ပုံစံဖြစ်သော ale ဟူသောစကားလုံးဖြစ်သည်။
ဘီယာ ဟူသော စကားလုံးသည် Common Germanic မှ ယနေ့ခေတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ Old English bēor မှ ဆင်းသက်လာသည်။  စကားလုံးကို ဘာသာစကား-မိသားစု၏ အရှေ့ဂျာမနီဌာနခွဲတွင် သက်သေမပြထားသော်လည်း အနောက်ဂျာမနီနှင့် မြောက်ဂျာမနီဘာသာစကားများ (မော်ဒန် ဒတ်ချ် နှင့် ဂျာမန် ဘီယာ၊ Old Norse bjórr) တို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။  စကားလုံး၏ အစောပိုင်း ဗျုပ္ပတ်ဗေဒကို အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေသည်- အဓိက သီအိုရီ သုံးခုမှာ စကားလုံးသည် Proto-Germanic *beuzą (Proto-Indo-European *bʰeusóm မှ) ဟူသော အဓိပ္ပာယ်မှာ 'ဘီယာ၏တဆေး၊ ဘီယာအညစ်အကြေးများ'၊  barley ဟူသော စကားလုံးနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။  သို့မဟုတ် ၎င်းကို Latin bibere  'သောက်ရန်' မှ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ချေးယူခဲ့သည်။
Old English နှင့် Old Norse တွင် ဘီယာ ဟူသော စကားလုံးသည် ale ကဲ့သို့ မရောသောအရက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပျားရည်နှင့် ပြုလုပ်ထားသော ချိုမြိန်ပြီး အစွမ်းထက်သော အချိုရည်နှင့် စပျစ်သီးမှလွဲ၍ အခြားအသီးအနှံတစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုသော ဖျော်ရည်၊ ale ထက် နေရာအနှံ့အပြားတွင် အများအပြားပါဝင်နိုင်သည်  အစောပိုင်း အလယ်ခေတ် သင်္ချိုင်း ပစ္စည်းတွေ မှာ တွေ့ရတဲ့ သေးငယ်တဲ့ သောက်ခွက် အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ သောက်စရာ ဟာ  mead  သို့မဟုတ်  cider နဲ့ ပိုတူပါတယ်။  သို့သော် ဂျာမန်ဘာသာတွင်၊ ဘီယာ-စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစောဆုံးကျန်ရှိနေသေးသော အရေးအသားအထောက်အထားများ မပေါ်မီကပင် ale-စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။  German hopped ale သည် အလယ်ခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် အင်္ဂလန်တွင် ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ အင်္ဂလိပ် စကားလုံး ဘီယာသည် ဂျာမန် အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်ယူလာရာ အင်္ဂလိပ်တွင်လည်း ဘီယာသည် ဟို့ပ်ပါသည့် ဖျော်ရည်များကို ရည်ညွှန်းရန် ခေတ်သစ် အစောပိုင်းကာလတွင် ပေါ်လာသည်။
ရှေးခေတ် အီဂျစ်ရှိ ဘီယာထုတ်လုပ်သည့် အီဂျစ်သစ်သားပုံစံ၊ Rosicrucian အီဂျစ်ပြတိုက်၊ San Jose၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား
ဘီယာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ပြင်ဆင်ထားသော အရက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။  အချဉ်ဖောက်ခြင်း၏ အစောဆုံး ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အထားများတွင် Isra ရှိ Raqefet Cave အနီးရှိ Haifa တောင်တန်းများအနီးရှိ Haifa တောင်တန်းများအနီးတွင် Haifa တောင်တန်းများ တွင်အသုံးပြုသော ကြမ်းကြန့်သျောလျောညီထွေရှိသော ဘီယာ၏အကြွင်းအကျန်များ ပါဝင်ပါသည်။  မြေအိုးမတင်မီခေတ် (ဘီစီ ၈၅၀၀ မှ ဘီစီ ၅၅၀၀ ဝန်းကျင်) အတွင်း Göbekli Tepe တွင် ဘီယာထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများရှိသည်။  မုယောစပါးမှ ထုတ်လုပ်သော ဘီယာ၏ အစောဆုံး ထင်ရှားသော ဓာတုဗေဒ အထောက်အထားများမှာ ဘီစီ ၃၅၀၀ မှ ၃၁၀၀ ခန့်အထိ၊ အီရန်အနောက်ခြမ်း Zagros တောင်တန်းများရှိ Godin Tepe ၏နေရာမှဖြစ်သည်။  သီးနှံကို စတင်စိုက်ပျိုးချိန် BC 10,000 ခန့်အထိ တည်ရှိနေသော်လည်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။  ဘီယာသည် ရှေးအီရတ်နှင့် ရှေးခေတ်အီဂျစ်တို့၏ သမိုင်းကြောင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဘီယာသည် ယဉ်ကျေးမှုများဖွဲ့စည်းရာတွင် အရေးပါသည်ဟု ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက ယူဆကြသည်။  လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 5,000 ခန့်က Uruk  (ယခုခေတ် အီရတ်) မြို့ရှိ အလုပ်သမားများကို ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရှင်များက ဘီယာအမြောက်အမြားဖြင့် ပေးဆောင်ခဲ့ကြသည်။  အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ဂီဇာရှိ ပိရမစ်ကြီးတည်ဆောက်မှုအတွင်း အလုပ်သမားတစ်ဦးစီသည် ပိရမစ်ဆောက်လုပ်မှုအတွက် အရေးပါသော အာဟာရနှင့် လန်းဆန်းမှုအဖြစ် နေ့စဉ် ဘီယာလေးလီတာမှ ငါးလီတာအထိ ရိက္ခာရရှိခဲ့သည်။
အစောဆုံး Sumerian အရေးအသားများတွင် ဘီယာနှင့်ပတ်သက်သော ရည်ညွှန်းချက်များပါရှိသည်။  ဥပမာများတွင် "The Hymn to Ninkasi" ဟုသိကြသော နတ်ဘုရားမ Ninkasi ထံ ဆုတောင်းချက်တစ်ခုပါဝင်ပြီး ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရှိ ဘီယာချက်နည်းကို မှတ်သားခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ရှေးခေတ်အကြံဉာဏ်များ ("မင်းဝမ်းကိုဖြည့်ပါ  . နေ့ရောညပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ") Gilgamesh ၏ Epic of Gilgamesh တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော Gilgamesh မှ ale-ဇနီးသည် Siduri မှ အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကို ရည်ညွှန်းနိုင်ပေမည်။  ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Ebla တွင် 1974 ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Ebla တက်ဘလက်များသည် ဘီစီ 2500 တွင် မြို့တော်တွင် ဘီယာထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။  ဆန်နှင့် သစ်သီးများကို အသုံးပြု၍ စိမ်ထားသော အချိုရည်ကို BC 7000 ခန့်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  ဆာကေးနှင့်မတူဘဲ၊ မှိုကို ဆန်ဆေးရည် (amylolytic အချဉ်ဖောက်ခြင်း) တွင် အသုံးမပြုပါ။  ထမင်းကို ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် အချဉ်ဖောက်ခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ထားပုံရသည်။  ရှေးအိန္ဒိယရှိ ဝေဒခေတ်ကာလတွင်၊ ဘီယာနှင့်တူသော ဆာရာစားသုံးမှုမှတ်တမ်းများရှိသည်။  သူ၏ ခရီးသွားစဉ်အတွင်း အာမေးနီးယားတွင် ဘီယာထုတ်လုပ်နေကြောင်း Xenophon  မှတ်သားခဲ့သည်။
သကြားပါသော မည်သည့်အရာမဆို နီးပါးသည် သဘာဝအတိုင်း အရက်အချဉ်ဖောက်ခြင်းကို ခံရနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဘီယာချက်ခြင်းတွင် အသုံးချနိုင်သည်။  ကစီဓာတ်၏ရင်းမြစ်တစ်ခုမှ ချိုမြိန်သောအရည်ကို လွတ်လပ်စွာတီထွင်ထားသော ဘီယာကို ယဉ်ကျေးမှုများစွာက သတိပြုမိကြဖွယ်ရှိသည်။  မုန့်နှင့် ဘီယာသည် အခြားနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အချိန်ပေးကာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် အဆင့်တစ်ခုအထိ သာယာဝပြောလာစေသည်။
François Jaques- တောင်သူလယ်သမားများသည် Fribourg ရှိ အရက်ဆိုင်တွင် ဘီယာကို နှစ်သက်ကြသည် (Switzerland၊ 1923)
ဘီယာကို ဂျာမန် နှင့် ဆဲလ်တစ် မျိုးနွယ်စုများက ဥရောပတစ်ခွင်တွင် ဘီစီ ၃၀၀၀ အထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး၊  အစောပိုင်းဥရောပသားများသောက်သည့်ထုတ်ကုန်ကို ယနေ့ခေတ်လူအများစုက ဘီယာအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပေ။  အခြေခံကစီဓာတ်ရင်းမြစ်အပြင်၊ အစောပိုင်းဥရောပဘီယာများတွင် သစ်သီးများ၊ ပျားရည်၊ အပင်အမျိုးအစားများစွာ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကဲ့သို့သော အခြားအရာများပါရှိသည်။  ၎င်းတို့မပါဝင်သည့်အရာမှာ hops ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာ ၈၂၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဥရောပတွင် Carolingian Abbot မှ ပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့ပြီး 1067 ခုနှစ်တွင် abess Hildegard of Bingen က ထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည်။
1516 တွင်၊ William IV၊ Bavaria မြို့စားက Reinheitsgebot (သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဥပဒေ) ကို 21 ရာစုတွင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့် ရှေးအကျဆုံးအစားအစာအရည်အသွေးစည်းမျဉ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်၊ ဘီယာ၏တစ်ခုတည်းသောခွင့်ပြုထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ရေ၊ ဟော့ပ်နှင့်မုယောစပါးများဖြစ်သည်  .  စက်မှုတော်လှန်ရေး မတိုင်မီက ထုတ်လုပ်သော ဘီယာများကို အေဒီ ၇ ရာစုတွင် ဥရောပ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော်လည်း ဘီယာကို ပြည်တွင်းတွင် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေဆဲဖြစ်သည်။  စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း၊ လက်မှုပညာဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ စက်မှုထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး 19 ရာစုအကုန်တွင် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုသည် သိသိသာသာ ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။  ရေအားလျှပ်စစ်မီတာနှင့် သာမိုမီတာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဘီယာချက်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ရလဒ်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်စေခြင်းဖြင့် ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။
1912 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Wisconsin ပြည်နယ် Milwaukee ၏ Joseph Schlitz Brewing ကုမ္ပဏီမှ အညိုရောင်ပုလင်းများကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။  ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လက်ခံလာခဲ့ကြပြီးကတည်းက ဘီယာ၏အရည်အသွေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေမည့် အန္တရာယ်ရှိသောရောင်ခြည်များကို တားဆီးထားသည်။
2007 ခုနှစ်အထိ၊ ဘီယာလုပ်ငန်းသည် ကြီးစိုးသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများနှင့် ဘီယာဆိုင်များမှ ဒေသတွင်း ဘီယာချက်စက်ရုံများအထိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အသေးစားထုတ်လုပ်သူများ ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။  2006 ခုနှစ်စာရင်းအရ၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ 510 မီတာနှင့်ညီမျှသော 133 ဘီလီယံလီတာ (အမေရိကန်ဂါလန် 35 ဘီလီယံကျော်) သည် တစ်နှစ်လျှင် ဘီယာရောင်းချပြီး စုစုပေါင်းကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ US$ 294.5 ဘီလီယံရှိသည်။  2010 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဘီယာသောက်သုံးမှုသည် ဟက်တိုလီတာ 450 သန်း (လီတာ 45 ဘီလီယံလီတာ) သို့မဟုတ် အမေရိကန်ထက် နှစ်ဆနီးပါးရှိသော်လည်း ရောင်းချသည့်5ရာခိုင်နှုန်းသာ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီတွင် 50 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပရီမီယံ ဘီယာများဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အလွန်အမင်းမိုးခေါင်မှုနှင့် အပူရှိန်ကြောင့် မုယောစပါးထုတ်လုပ်မှု ရုတ်တရက် ကျဆင်းသွားခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ဘီယာရရှိနိုင်မှုနှင့် ဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ဘီယာချက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ပြသည့် ကလစ်နှိပ်နိုင်သော မြေပုံ
ဘူး သို့မဟုတ် အိတ်
ဘီယာထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘီယာချက်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။  ဘီယာချက်လုပ်ရန်အတွက် သီးသန့်အဆောက်အအုံကို ဘီယာချက်စက်ရုံဟု ခေါ်သော်လည်း အိမ်တွင် ဘီယာပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသော်လည်း ဘီယာချက်လုပ်သည့်နေရာကို ဘီယာချက်စက်ရုံဟု မကြာခဏခေါ်သည်။  ဘီယာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကို ဘီယာချက်စက်ရုံ သို့မဟုတ် ဘီယာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဟု ခေါ်သည်။  ယနေ့ခေတ်တွင် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းစကေးဖြင့်ပြုလုပ်သော ဘီယာကို အိမ်တွင်ပြုလုပ်သည့် ဘီယာအများစုကို အိမ်တွင်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း မည်သည့်နေရာတွင်ပင်ဖြစ်စေ အိမ်ဘရူးလုပ်နည်းအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။  သမိုင်းကြောင်းအရ အိမ်တွင်းဘီယာကို farmhouse ale ဟုခေါ်သည်။
ဘီယာချက်ခြင်းဥပဒေသည် ထောင်စုနှစ်များစွာကြာအောင် ဥပဒေနှင့်အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းခံရပြီး 19 ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် အခွန်ကောက်ခံခြင်းမှ ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်းကို UK တွင်သာ စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။  သို့သော်လည်း ယူကေအစိုးရသည် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေများကို ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ တွင် သြစတြေးလျနှင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တို့နောက်တွင် တစ်နိုင်ငံချင်းစီမှ ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်သည့် ဥပဒေများကို အတည်ပြုခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း အိမ်တွင်းဘွန်းလုပ်ခြင်းကို လူကြိုက်များသည့် ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
ဘီယာချက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကစီဓာတ်ရင်းမြစ်ကို wort ဟုခေါ်သော သကြားရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်နှင့် တဆေးမှ အကျိုးသက်ရောက်သော အချဉ်ဖောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဘီယာဟု လူသိများသော wort ကို အရက်ယမကာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
ကစီဓာတ်အရင်းအမြစ် (ပုံမှန်အားဖြင့် မုယောစပါးကို ရေနွေးပူပူ) ရောစပ်ခြင်းဖြင့် wort ကို ပြင်ဆင်သည့် ပထမအဆင့်ကို "mashing" ဟုခေါ်သည်။  ရေနွေး (ဘီယာအခေါ်အဝေါ်အရ "အရက်" ဟု ခေါ်သည်) ကို ထောင်းထားသော malt သို့မဟုတ် malt ("grist" ဟု သိကြသော) နှင့် ရောနှောထားသော mash tun တစ်ခုထဲတွင်။  ကစီဓာတ်များကို သကြားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့်အတောအတွင်းတွင် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီခန့်ကြာမြင့်ပြီး ဂျုံမှုန့်များကို အစေ့အဆန်များမှ ဖယ်ထုတ်ပါသည်။  ထို့နောက် အစေ့အဆန်များကို "sparging" ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဆေးကြောပါ။  ဤဆေးကြောခြင်းသည် ဖျော်ရည်လုပ်သူအား အစေ့အဆန်များမှ အချဉ်ဖောက်နိုင်သော အရည်များကို တတ်နိုင်သမျှ စုဆောင်းနိုင်စေပါသည်။  wort နှင့် sparge water တို့မှ သုံးစွဲထားသော စပါးများကို စစ်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို wort separation ဟုခေါ်သည်။  ဂျုံကြမ်းကို စစ်ထုတ်သည့် ကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ဂျုံကြမ်းကို ခွဲထုတ်ခြင်းအတွက် ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်သည် တောက်ပြောင်နေသည်။  အချို့သော ခေတ်မီ ဘီယာချက်စက်ရုံများသည် ပိုမို၍ စေ့စပ်သော မြေသားကို ခွင့်ပြုသည့် ဇကာဘောင်များကို အသုံးပြုခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။
16 ရာစု ဘီယာချက်စက်ရုံ
ခေတ်မီ ဘီယာချက်စက်ရုံ အများစုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြဲချခြင်းကို အသုံးပြုကြပြီး မူရင်း wort နှင့် sparge water ကို အတူတကွ စုဆောင်းကြသည်။  သို့သော် မသုံးရသေးသော အစေ့အဆန်များဖြင့် ဒုတိယအသုတ် သို့မဟုတ် တတိယအသုတ်ကို စုဆောင်းနိုင်သည်။  ပြေးခြင်းတစ်ခုစီသည် ပျော့ညံ့သော wort ထွက်လာပြီး ထို့ကြောင့် ပျော့သော ဘီယာကို ထုတ်ပေးသည်။  ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဒုတိယ (နှင့် တတိယ) အပြေးများဟု ခေါ်သည်။  အပြေးပေါင်းများစွာဖြင့် ချက်စားခြင်းကို parti gyle brewing ဟုခေါ်သည်။
ပြုတ်ကျခြင်းမှ စုဆောင်းရရှိသော အချိုများကို ရေနွေးအိုး သို့မဟုတ် "ကြေးနီ" (ဤအိုးများကို ရှေးယခင်က ကြေးနီဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်)  ထည့်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နာရီခန့် ပြုတ်ပါ။  ပွက်ပွက်ဆူနေစဉ်တွင် wort တွင်ရေများအငွေ့ပျံသွားသော်လည်း wort ၏သကြားများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကျန်ရှိနေသည်;  ၎င်းသည် ဘီယာရှိ ကစီဓာတ် အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေသည်။  ပွက်ပွက်ဆူခြင်းသည် ကြိတ်ချေသည့်အဆင့်မှ ကျန်ရှိသော အင်ဇိုင်းများကို ချေဖျက်သည်။  ခါးသီး၊ အရသာနှင့် အနံ့၏ရင်းမြစ်အဖြစ် ပြုတ်နေချိန်တွင် ဟော့ပ်များကို ပေါင်းထည့်သည်။  ပွက်ပွက်ဆူနေစဉ်တွင် Hops ကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ထည့်နိုင်သည်။  ဟော့ပ်များကို ကြာကြာပြုတ်လေ၊ ၎င်းတို့သည် ခါးလေလေ၊ သို့သော် ဟော့ပ်အရသာနှင့် ရနံ့ နည်းပါးလေလေ ဘီယာထဲတွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ပွက်ပွက်ဆူပြီးနောက်၊ ပျားရည်ကို အအေးခံပြီး တဆေးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။  အချို့သော ဘီယာချက်စက်ရုံများတွင်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ရန်နှင့် ဇကာအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်၊  သို့သော် အများအားဖြင့် ပျားရည်ကို အချဉ်ဖောက်ရန်အတွက် ရိုးရိုးအအေးခံထားပြီး၊ တဆေးထည့်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်သည်။  ကစော်ဖောက်နေစဉ်တွင် wort သည် ဘီယာ၏ တဆေးအမျိုးအစားနှင့် အစွမ်းသတ္တိပေါ်မူတည်၍ တစ်ပတ်မှလအထိ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင် ဘီယာဖြစ်လာသည်။  အီသနောထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်၊ ဂျုံတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်အမွှားအမှုန်အမွှားများသည် အချဉ်ဖောက်ချိန်တွင် အနည်ထိုင်သွားပါသည်။  အချဉ်ဖောက်ပြီးသည်နှင့် တဆေးသည်လည်း ပြေသွားကာ ဘီယာကို ကြည်လင်စေသည်။
ကစော်ဖောက်ထားချိန်တွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အများစုကို ထောင်ချောက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် လွတ်မြောက်ခွင့်ပြုထားပြီး ဘီယာသည် ဖိအား၏လေထုတစ်ခုခန့်သာ ကာဗွန်နိတ်ဖြင့် ကျန်ခဲ့သည်။  ကာဗွန်နိတ်ကို ဘီယာဘူးကဲ့သို့သော ဖိအားအိုးသို့ လွှဲပြောင်းကာ ဖိထားသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အချဉ်ဖောက်ခြင်းမပြီးမီ လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဖိအားများ ကွန်တိန်နာအတွင်းတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဖိအားများ တိုးပွားလာတတ်သည်။  တခါတရံတွင် ဘီယာကို စစ်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ (ထို့ကြောင့် တဆေးပါ၀င်နေသေးသည်) ကို ပုလင်းထဲသို့ထည့်ကာ သကြားအနည်းငယ်ထည့်ထားကာ ပုလင်းအတွင်းရှိ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို လိုချင်သောပမာဏကိုထုတ်ပေးသည်။
စော်ဖောက်ခြင်းကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် အခြေခံနှင့် ဒုတိယအဆင့် နှစ်မျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သည်။  ပင်မစော်ဖောက်သည့်ကာလအတွင်း အရက်အများစုကို ထုတ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၊ ဘီယာကို အိုးအသစ်သို့ လွှဲပြောင်းပြီး ဆင့်ပွားစော်ဖောက်သည့်ကာလကို ခွင့်ပြုသည်။  ထုပ်ပိုးမှုမပြုမီ သို့မဟုတ် ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိုလှောင်မှုမပြုလုပ်မီ ဘီယာသည် ရှည်လျားသောသိုလှောင်မှု လိုအပ်သောအခါတွင် ဒုတိယအချဉ်ဖောက်ခြင်းကို အသုံးပြုသည်။  ဘီယာသည် အချဉ်ဖောက်ပြီးသောအခါ၊ ၎င်းကို ဘူးခွံများတွင် ဘူးခွံများ၊ အလူမီနီယမ် ဗူးများ၊ သို့မဟုတ် အခြားဘီယာအမျိုးအစားများအတွက် ပုလင်းများအတွင်း၌ ထုပ်ပိုးထားသည်။
မကြော်ခင် မုယောစပါးကို နှပ်ထားပါ။
ဘီယာ၏ အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ရေ၊  မုယောစပါး ကဲ့သို့သော ကစီဓာတ် အရင်းအမြစ် ဖြစ်သော မုယောစပါး ၊ သို့မဟုတ် မှည့်ထားသော ပြောင်း (Tiswin and Tesgüino ကဲ့သို့) ကို သန့်စင်အောင် ပြုလုပ် နိုင်သည် (သကြားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ) ပြီးနောက် အချဉ်ဖောက် (အီသနောနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း)၊  စော်ဖောက်ခြင်းကို ထုတ်လုပ်ရန် ဘီယာချက်သည့် တဆေး၊  နှင့် ဟော့စ်ကဲ့သို့သော အရသာတစ်မျိုး။  ကစီဓာတ်ရင်းမြစ်များ၏ ရောစပ်ထားသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် ပြောင်း (ပြောင်း)၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ သို့မဟုတ် သကြားတို့ကို မကြာခဏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် မုယောစပါးကို မုယောစပါးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့်အခါတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။  အသုံးနည်းသော ကစီဓာတ်ရင်းမြစ်များမှာ အာဖရိကရှိ ပြောင်းဆန်၊ ဆန်စပါးနှင့် ပီလောပီနံအမြစ်၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ အာလူးနှင့် မက္ကဆီကိုရှိ agave တို့အပါအဝင် အခြားအသုံးများသည်။  ဘီယာချက်ချက်တစ်ခုစီတွင် ကစီဓာတ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုစီ၏ ပမာဏကို စုပေါင်းဆန်ငွေစက္ကူဟုခေါ်သည်။
ရေသည် ဘီယာ၏ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အလေးချိန်၏ 93% ရှိသည်။  ရေကိုယ်တိုင်က အရသာမရှိသော်လည်း ၎င်း၏ပျော်ဝင်နေသောသတ္တုဓာတ်အဆင့်၊ အထူးသဖြင့် ဘီကာဗွန်နိတ်အိုင်းယွန်းသည် ဘီယာ၏အချောထည်အရသာကို လွှမ်းမိုးသည်။  ဒေသတစ်ခုစီ၏ ရေ၏ တွင်းထွက်ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၊ သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာများသည် မူလက အချို့သော ဘီယာအမျိုးအစားများ၏ တစ်ဦးတည်းထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီး တစ်ခုစီကို ဒေသဆိုင်ရာ လက္ခဏာများဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။  ဒေသဆိုင်ရာ ဘူမိဗေဒအရ Pilsner (Pilsner Urquell) ကဲ့သို့ တင်းမာသောရေသည် ဂင်းနစ်ကဲ့သို့ တောင့်တင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ ဘူမိဗေဒအရ Pilsner (Pilsner Urquell) က ချက်စားရန် သင့်လျော်ပါသည်။  အင်္ဂလန်ရှိ Burton ရေပြင်တွင် Burtonisation ဟုသိကြသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ကို ဖျော်ရည်လုပ်သူများသည် Burtonisation ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒေသခံရေထဲသို့ gypsum ပေါင်းထည့်စေသည့် အတိုင်းအတာအထိ ဂျစ်ပဆမ်ပါရှိသည်။
ကစီဓာတ်ရင်းမြစ်သည် ဘီယာတွင် အချဉ်ဖောက်နိုင်သော ပစ္စည်းကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဘီယာ၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် အရသာ၏ အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။  ဘီယာတွင် အသုံးအများဆုံး ကစီဓာတ်အရင်းအမြစ်မှာ ဂျုံမှုန့်ဖြစ်သည်။  အစေ့အဆန်များကို ရေတွင်စိမ်ထားခြင်းဖြင့် အစေ့အဆန်များ စတင်ပေါက်ကြားနိုင်ကာ မီးဖိုထဲတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပေါက်သွားသော စပါးများကို အခြောက်ခံပြီး အခြောက်ခံပါ။  Malting grain သည် စပါးရှိ ကစီဓာတ်များကို အချဉ်ဖောက်နိုင်သော သကြားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော အင်ဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။  တူညီသောအစေ့မှ malt ၏အရောင်ကွဲပြားစေရန်အတွက် မတူညီသော ကင်ချိန်နှင့် အပူချိန်ကို အသုံးပြုပါသည်။  ပိုနက်သော malt များသည် ပိုမည်းသော ဘီယာများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။  ဘီယာအားလုံးနီးပါးတွင် ကစီဓာတ်အများစုအဖြစ် မုယောဆန်များပါဝင်သည်။  ခြွေလှေ့နေစဉ်အတွင်း ၎င်း၏ အမျှင်ထည်သည် စပါးနှင့် တွဲနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။  မုယောစပါးကို ကြိတ်ပြီးနောက် စပါးလင်ကို ကြိတ်ချေပြီး နောက်ဆုံးတွင် အခွံကို ဖယ်ထုတ်ကာ အတုံးကြီးများ ကွဲသွားပါသည်။  အချိုမှုန့်သည် မပျော်ဝင်နိုင်သော အစေ့အဆန်ပစ္စည်းများမှ ခွဲထုတ်သောအခါတွင် ဤအပိုင်းများသည် စပါးအတုံးများနှင့်အတူ ရှိနေကြပြီး၊ အချိုမှုန့်သည် မပျော်ဝင်နိုင်သော စပါးစေ့များကို ခွဲထုတ်သည့်အခါတွင် ဇကာအိပ်ရာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။  ဂျုံ၊ ဆန်၊ oats နှင့် ကောက်အပါအဝင် အခြားသော ကြေညက်သော နှင့် မကြေညက်သော အစေ့အဆန်များ (မကြာခဏနည်းသော ပြောင်းဖူးနှင့် ပြောင်းဖူးဆန်) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။  အချို့သော ဘီယာချက်လုပ်သူများသည် ဂျုံ၊ မုယောစပါးနှင့် ကောက်ကဲ့သို့သော ဂလူတန်ပါဝင်သော အစေ့အဆန်များကို မစားသုံးနိုင်သူများအတွက် ဂျုံမှုန့်မပါသော ဂျုံမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဂလူတင်မပါသောဘီယာကို ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Hallertau၊ ဟော့ပ်ခြံတွင် ခုန်ကူးသည့် ကွန်ကုပ်
အရသာရှိသော ဘီယာသည် ဟော့ပ်များ ၏ တစ်ဦးတည်းသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အဓိကဖြစ်သည်။  ဟော့ပ်နွယ်ပင်၏အပွင့်ကို ယနေ့ပြုလုပ်သော ဘီယာအားလုံးနီးပါးတွင် အနံ့အရသာနှင့် တာရှည်ခံအေးဂျင့်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။  ပန်းများကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ "ဟော့" ဟုခေါ်ကြသည်။  ဘီယာတွင် ဟော့ပ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးသမိုင်းဝင်ဖော်ပြချက်မှာ အေဒီ ၈၂၂ မှ Adalhard the Elder ဟုလည်းသိကြသော Adalhard the Elder မှရေးသားခဲ့သော ဘုန်းကြီးကျောင်းစည်းမျဉ်းများဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဟော့ပ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးသည့်နေ့စွဲသည် ဆယ့်သုံးရာစုဖြစ်သည်။  တစ်ဆယ့်သုံးရာစုမတိုင်မီနှင့် ဆယ့်ခြောက်ရာစုအထိ၊ ထူးထူးခြားခြားအနံ့အရသာအဖြစ် ဟော့ပ်များဝင်ရောက်လာချိန်တွင် ဘီယာသည် အခြားအပင်များနှင့် အရသာရှိခဲ့သည်။  ဥပမာ၊ ပရဒိသုအစေ့အဆန်များ သို့မဟုတ် alehoof။  အနံ့မျိုးစုံရှိသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ဘယ်ရီသီးများနှင့် ဒေါနကဲ့သို့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပင် ပေါင်းစပ်ထားသည့်အရောအနှောအဖြစ် Gruit ဟုသိကြပြီး ဟော့ပ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကို ယခုအခါတွင် အသုံးပြုလာမည်ဖြစ်သည်။  Scottish Heather Ales ကုမ္ပဏီမှ Fraoch' နှင့် French Brasserie-Lancelot ကုမ္ပဏီမှ Cervoise Lancelot ကဲ့သို့သော အချို့သော ယနေ့ဘီယာများသည် အနံ့အရသာအတွက် ဟော့ပ်များထက် အခြားအပင်များကို အသုံးပြုကြသည်။
Hops များတွင် ဘီယာသောက်သူများ နှစ်သက်သည့် လက္ခဏာများစွာ ပါရှိသည်။  Hops သည် malt ၏ချိုမြိန်မှုကိုထိန်းညှိပေးသောခါးသီးမှုကိုကူညီသည်;  ဘီယာများ၏ အခါးကို International Bitterness Units အတိုင်းအတာဖြင့် တိုင်းတာသည်။  Hops သည် ဘီယာအတွက် ပန်းများ၊ citrus နှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ အနံ့နှင့် အရသာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။  Hops တွင် ဘီယာ၏ တဆေး၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို နှစ်လိုဖွယ်နည်းသော အဏုဇီဝသက်ရှိများနှင့် "ဦးခေါင်းထိန်းသိမ်းခြင်း" တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဘီယာဖျော်ရည်၏ တဆေး၏လုပ်ဆောင်မှုကို ဦးစားပေးသည့် ပဋိဇီဝဆေးအာနိသင်တစ်ခု ရှိသည်၊  Hops ၏ အချဉ်ဓာတ်သည် တာရှည်ခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။
တဆေးသည် ဘီယာတွင် အချဉ်ဖောက်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော သေးငယ်သောဇီဝရုပ်ဖြစ်သည်။  တဆေးသည် အရက်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် အစေ့အဆန်များမှ ထုတ်ယူထားသော သကြားများကို ဇီဝြဖစ်ပျက်စေပြီး wort ကို ဘီယာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။  ဘီယာကို အချဉ်ဖောက်ခြင်းအပြင် တဆေးသည် စရိုက်နှင့် အရသာကို လွှမ်းမိုးပါသည်။  ဘီယာပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တဆေး၏ အဓိကအမျိုးအစားများမှာ ထိပ်တန်းအချဉ်ဖောက်ခြင်း Saccharomyces cerevisiae နှင့် အောက်ခြေစော်ဖောက်ခြင်း Saccharomyces pastorianus တို့ဖြစ်သည်။  Brettanomyces အချဉ်ဖောက်ထားသော သိုးသားပေါက်များကို ချက်ပြီး Torulaspora delbrueckii အချဉ်ဖောက်ထားသော Bavarian weissbier။  စော်ဖောက်ခြင်းတွင် တဆေး၏ အခန်းကဏ္ဍကို နားမလည်မီတွင် အချဉ်ဖောက်ခြင်းတွင် တောရိုင်း သို့မဟုတ် လေထဲမှ တဆေးများ ပါဝင်ပါသည်။  lambics ကဲ့သို့သော ပုံစံအနည်းငယ်သည် ယနေ့ခေတ်တွင် ဤနည်းလမ်းကို အားကိုးသော်လည်း ခေတ်မီစော်ဖောက်ခြင်းအများစုသည် သန့်စင်သော တဆေးယဉ်ကျေးမှုကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။
အချို့သော ဘီယာချက်လုပ်သူများသည် ပရိုတင်းအခဲများနှင့်အတူ ပရိုတင်းအခဲများနှင့်အတူ ဘီယာထဲမှ သဲလွန်စများ (အစိုင်အခဲအဖြစ် စုဆောင်း) ကို ဘီယာတွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ရှင်းလင်းသောအေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေများထည့်ထားသည်။  ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဂျုံဘီယာကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားနှင့် ရှေးကျသော ဘီယာပုံစံများထက် ဘီယာကို တောက်ပသန့်ရှင်းစေပါသည်။  ရှင်းလင်းရေးအေးဂျင့်များ၏ ဥပမာများတွင် ငါးများ၏ ရေကူးကန်များမှ ရရှိသော ငါးမျှားချိတ်များ ပါဝင်သည်။  အိုင်ယာလန်ရေညှိ၊  kappa carrageenan၊ ပင်လယ်ရေမှော် Kappaphycus cottonii;  Polyclar (အတု);  နှင့် ဂျယ်လာ။  ဘီယာကို "သက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက် သင့်လျော်သည်" ဟု အမှတ်အသားပြုပါက၊ ၎င်းကို ပင်လယ်ရေမှော်နှင့် သို့မဟုတ် အတုပြုလုပ်ထားသော အေးဂျင့်များဖြင့် ရှင်းလင်းထားသည်။
ဘီယာချက်စက်ရုံသည် နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ် ဘီယာသောက်သုံးမှု
21 ရာစုရှိ ဘီယာချက်စက်ရုံများ၏သမိုင်းတွင် စကေး၏စီးပွားရေးကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ သေးငယ်သောဘီယာများကိုစုပ်ယူသည့်ပိုကြီးသောဘီယာချက်စက်ရုံများပါ၀င်သည်။[ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်] 2002 ခုနှစ်တွင် South African Breweries မှ SABMiller ကိုရှာတွေ့ရန် North American Miller Brewing ကုမ္ပဏီကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံးဘီယာချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။  မြောက်အမေရိက Anheuser-Busch ပြီးနောက်။  2004 ခုနှစ်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံ Interbrew သည် ထုထည်အလိုက် တတိယအကြီးဆုံး ဘီယာချက်စက်ရုံဖြစ်ပြီး Brazilian AmBev သည် ပဉ္စမအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။  ၎င်းတို့သည် InBev သို့ ပေါင်းစည်းကာ အကြီးဆုံး ဘီယာချက်စက်ရုံ ဖြစ်လာသည်။  2007 ခုနှစ်တွင် SABMiller သည် InBev နှင့် Anheuser-Bush ကို ကျော်လွန်ကာ 2007 ခုနှစ်တွင် ဒတ်ခ်ျပရီမီယံ ဘီယာအမှတ်တံဆိပ် Grolsch ၏ ဘီယာချက်လုပ်သူ Royal Grolsch ကို ဝယ်ယူသောအခါတွင် InBev (ဒုတိယအကြီးဆုံး) သည် Anheuser-Busch (တတိယအကြီးဆုံး) ကို ဝယ်ယူသောအခါ 2008 ခုနှစ်တွင်၊  -Busch InBev ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးဘီယာချက်လုပ်သူဖြစ်လာပြန်သည်။
2020 ခုနှစ်အထိ၊ စျေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီ Technavio ၏အဆိုအရ AB InBev သည် Heineken ဒုတိယ၊ CR Snow တတိယ၊ Carlsberg စတုတ္ထနှင့် Molson Coors ငါးခုဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးဘီယာကုမ္ပဏီအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
မိုက်ခရိုဘရောင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လက်မှုပညာ ဘီယာစက်ရုံသည် ဘီယာပမာဏအကန့်အသတ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။  ဘီယာချက်စက်ရုံတစ်ခုမှ အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ဘီယာပမာဏကို မိုက်ခရိုဘီယာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရဆဲဖြစ်ပြီး ဒေသအလိုက်နှင့် အာဏာပိုင်များက ကွဲပြားသည်။  US တွင် ဘီယာစည်ပေါင်း 15,000 (1.8 megalitres; 390 ထောင် အင်ပါယာဂါလန်; 460 ထောင် US ဂါလံ)  တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။  ဘီယာဆိုင်သည် အရက်ဆိုင် သို့မဟုတ် အခြားအရက်ဆိုင်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မိုက်ခရိုဘီယာထုတ်လုပ်သည့် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။  ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘီယာချက်စက်ရုံများ၏ သိပ်သည်းဆအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် microbreweries အများစုမှာ ဘီယာချက်စက်ရုံပေါင်း ၂၀၀ ခန့်ရှိသည့် Franconia ၏ ဂျာမန်ဒေသ၊ အထူးသဖြင့် အထက်ဖရန်ကိုနီးယားခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။  ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Bavaria ရှိ Benedictine Weihenstephan ဘီယာချက်စက်ရုံသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးဆောင်သည့် မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ထိုနှစ်မှ မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် 768 ခုနှစ်အထိ ၎င်း၏အမြစ်များကို ခြေရာခံနိုင်သည်။  ဘီယာချက်စက်ရုံကို 1040 ခုနှစ်တွင် City of Freising မှ လိုင်စင်ရရှိခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဘီယာချက်စက်ရုံဖြစ်သည်။
ဘီယာနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘီယာချက်စက်ရုံများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည့် ပန့်ကလစ်များဖြင့် Cask ale လက်ပန့်များ
ဘီယာအမျိုးအစားများစွာရှိသော်လည်း ဘီယာချက်ခြင်း၏အခြေခံများကို အမျိုးသားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်တွင် မျှဝေထားသည်။  ရိုးရာဥရောပ ဘီယာချက်လုပ်သည့် ဒေသများ—ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ အင်္ဂလန် နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ—တွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဘီယာမျိုးကွဲများရှိသည်။
အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ Michael Jackson သည် သူ၏ 1977 ခုနှစ်ထုတ် The World Guide To Beer စာအုပ်တွင် ဒေသတွင်း ဓလေ့ထုံးစံနှင့် နာမည်များဖြင့် အကြံပြုထားသော ဒေသစတိုင်လ်အုပ်စုများတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဘီယာများကို အမျိုးအစားခွဲထားသည်။  Fred Eckhardt သည် 1989 ခုနှစ်တွင် The Essentials of Beer Style တွင် Jackson ၏ အလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိပ်တန်းစော်ဖောက်ထားသော ဘီယာများကို အများအားဖြင့် 15 မှ 25 °C (59 နှင့် 77 °F) အကြားတွင် မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာသည့် ထိပ်တန်းအချဉ်ဖောက်ထားသော တဆေးဖြစ်သော Saccharomyces cerevisiae ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။  ဤအပူချိန်တွင်၊ တဆေးသည် အက်စတာများနှင့် အခြားသော အနံ့အရသာနှင့် အနံ့ထွက်ပစ္စည်းများကို သိသိသာသာ ထုတ်ပေးပြီး ရလဒ်မှာ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဇီးသီး သို့မဟုတ် ဆီးသီးတို့ကဲ့သို့ အနည်းငယ်သော "အသီးအနှံများ" ဒြပ်ပေါင်းများ ပါရှိသည့် ဘီယာဖြစ်သည်။
15 ရာစုတွင် ဖလန်ဒါးစ်မှ အင်္ဂလန်သို့ ဟော့ပ်များ မိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ "အယ်လီ" သည် ဟော့ပ်ပြုတ်ရည်ဖြင့် ချက်ခြင်းဖော်ပြရန် "ဘီယာ" ကို မမျှော်လင့်ထားသော စိမ်ထားသောအချိုရည်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
Real ale သည် 1973 ခုနှစ်တွင် Campaign for Real Ale (CAMRA) မှ "သမားရိုးကျပါဝင်ပစ္စည်းများမှ ချက်ထားသော ဘီယာကို ခွဲထုတ်ပြီး ကွန်တိန်နာအတွင်း ဆင့်ပွားစော်ဖောက်ခြင်းဖြင့် ရင့်ကျက်ပြီး ပြင်ပကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို အသုံးမပြုဘဲ ကျွေးမွေးခြင်း" အတွက် စကားလုံးဖြစ်သည်။  ၎င်းကို ပုလင်းတပ်ထားသော နှင့် ဘူးခွံတပ်ထားသော ဘီယာများတွင် အသုံးပြုသည်။
Pale ale သည် ထိပ်တန်းအချဉ်ဖောက်ထားသော တဆေးကို အသုံးပြုပြီး အရောင်ဖျော့သော malt အများစုကို အသုံးပြုသည့် ဘီယာဖြစ်သည်။  ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့အဓိက ဘီယာစတိုင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
တောင့်တင်းသော နှင့် ပေါ်တာများသည် မှောင်သော ဘီယာများ သည် မောလ်များ သို့မဟုတ် မုယောကင်ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ထားကာ ပုံမှန်အားဖြင့် နှေးကွေးသော အချဉ်ဖောက်ထားသော တဆေးဖြင့် ချက်ထားသည်။  Baltic porter၊ dry stout နှင့် Imperial stout အပါအဝင် ကွဲပြားမှုများ အများအပြားရှိသည်။  လန်ဒန်မြို့၏ လမ်းများနှင့် မြစ်ပေါ်တာသမားများကြား ရေပန်းစားသော အညိုရောင် ဘီယာကို ဖော်ပြရန်အတွက် "ပေါ်တာ" အမည်ကို 1721 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။  တောင့်တင်းသော စကားလုံးကို 1677 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဤတူညီသောဘီယာကို တောင့်တင်းခြင်းဟုလည်း လူသိများသည်။ တောင့်တင်းခြင်းနှင့် ပေါ်တာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းနှင့် ရောယှက်လျက်ရှိသည်။
Mild ale တွင် အဓိကအားဖြင့် malty အာခေါင်ရှိသည်။  များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်အမှောင်ထုသည်အမှောင်ထုဖြစ်ပြီး 3% မှ 3.6% ဖြင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သည်။
ဂျုံဘီယာကို ဂျုံ၏ အချိုးအစားများစွာဖြင့် ချက်ထားသော်လည်း ၎င်းတွင် ဂျုံမုယောစပါး၏ အချိုးအစား သိသိသာသာပါရှိသည်။  ဂျုံဘီယာသည် အများအားဖြင့် အပေါ်မှ အချဉ်ဖောက်သည်။  ဂျုံဘီယာ၏ အရသာသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံပေါ်မူတည်၍ သိသိသာသာကွဲပြားပါသည်။
Kriek၊ ချယ်ရီသီးနဲ့ချက်တဲ့ ဘီယာမျိုးစုံ
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံထုတ် ဘီယာ Lambic သည် စိုက်ပျိုးခြင်းထက် တောရိုင်းတဆေးကို အသုံးပြု၍ သဘာဝအတိုင်း စိမ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။  ၎င်းတို့အများစုမှာ ဘီယာထုတ်လုပ်သည့်တဆေးမျိုးကွဲများမဟုတ်ကြဘဲ Saccharomyces cerevisiae သည် အနံ့နှင့် အချဉ်အတွက် သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။  Brettanomyces bruxellensis နှင့် Brettanomyces lambicus ကဲ့သို့သော တဆေးမျိုးကွဲများသည် သိုးသငယ်များတွင် အဖြစ်များပါသည်။  ထို့အပြင်၊ Lactobacillus ဘက်တီးရီးယားကဲ့သို့သော အခြားသက်ရှိများသည် အချဉ်ဓာတ်ကို အထောက်အကူပြုသည့် အက်ဆစ်များကို ထုတ်လုပ်သည်။
Lager သည် အချဉ်ဖောက်ထားသော ဘီယာဖြစ်သည်။  Pale lagers များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသုံးအများဆုံး ဘီယာများဖြစ်သည်။  အများစုသည် "pilsner" အမျိုးအစားဖြစ်သည်။  "Lager" ဟူသောအမည်သည် "သိုလှောင်ရန်" အတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာကာ Bavaria တစ်ဝိုက်ရှိ ဘီယာချက်လုပ်သူများသည် ပူနွေးသောနွေရာသီလများတွင် အေးမြသောမြေအောက်ခန်းများနှင့် ဂူများတွင် ဘီယာများသိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။  အေးမြသော အခြေအနေတွင် သိမ်းဆည်းထားသောအခါတွင် ဘီယာများသည် အညစ်အကြေးများ ဆက်လက်တည်နေပြီး အနည်အနှစ်များ ကင်းစင်ကြောင်း အဆိုပါ ဘီယာလုပ်သူများသည် သတိပြုမိကြသည်။
Lager တဆေးသည် အေးမြသောအောက်ခြေအချဉ်ဖောက်ထားသောတဆေး (Saccharomyces pastorianus) ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် 7–12 °C (45–54 °F) (စော်ဖောက်ခြင်းအဆင့်) တွင် ရှည်လျားသောဒုတိယအချဉ်ဖောက်ခြင်းကို  0–4 ° တွင်ပေးသည်။  C (32–39 °F) (လျောကျနေသောအဆင့်)။  အလယ်တန်းအဆင့်တွင်၊ လေဂါသည် ကြည်လင်ပြီး နူးညံ့သည်။  အေးမြသောအခြေအနေများသည် အီစတာများနှင့် အခြားအကျိုးဆက်များ၏ သဘာဝထုတ်လုပ်မှုကို ဟန့်တားကာ "သန့်ရှင်း" အရသာရှိသော ဘီယာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခေတ်မီတဆေးမျိုးကွဲများဖြင့်၊ လီဂါဘီယာလုပ်ငန်းအများစုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 1-3 ပတ်အတွင်း အအေးခန်းသိုလှောင်မှုကို ခဏသာအသုံးပြုသည်။
ဘီယာကို ခါးသီးမှု၊ ခွန်အားနှင့် အရောင်ဖြင့် တိုင်းတာပြီး အကဲဖြတ်သည်။  ခံစားရသောခါးသီးမှုကို American Society of Brewing Chemists နှင့် European Brewery Convention တို့ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် သတ်မှတ်ထားသော International Bitterness Units scale (IBU) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။  နိုင်ငံတကာစကေးသည် EBU အဖြစ် အတိုကောက်ခေါ်လေ့ရှိသော European Bitterness Units စကေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပြီး ခါးသီးမှုတန်ဖိုးများသည် တူညီသင့်သည်။
Paulaner dunkel — နက်နဲသောလေဂါတစ်ခု
ဘီယာအရောင်ကို malt မှဆုံးဖြတ်သည်။  အသုံးအများဆုံးအရောင်မှာ ဖျော့တော့သော malts ကိုအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ပယင်းဖျော့ရောင်ဖြစ်သည်။  Pale lager နှင့် pale ale တို့သည် လောင်စာဆီ coke ဖြင့် အခြောက်ခံထားသော malt မှပြုလုပ်သော ဘီယာများအတွက် အသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။  Coke ကို 1642 ခုနှစ်တွင် malt ကင်ရန်အတွက် ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သော်လည်း 1703 ခုနှစ်ဝန်းကျင်အထိ pale ale ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
အရောင်းပမာဏအရ ယနေ့ခေတ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ Pilsen မြို့တွင် ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် ချက်လုပ်ခဲ့သော အရောင်ဖျော့လေဂါကို အခြေခံ၍ ရောင်းချမှုပမာဏအရ ယနေ့ ဘီယာအများစုကို အခြေခံထားသည်။  ခေတ်မီအရောင်ဖျော့ဖျော့သည် အရောင်ဖျော့ပြီး သိသာထင်ရှားသော ကာဗွန်နိတ်များ (fizzy ပူဖောင်းများ) နှင့် ထုထည်ပါဝင်မှု 5% ဝန်းကျင်တွင် ပုံမှန်အရက်ဖြစ်သည်။  Pilsner Urquell၊ Bitburger နှင့် Heineken ဘီယာအမှတ်တံဆိပ်များသည် အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ် Budweiser၊ Coors နှင့် Miller တို့ကဲ့သို့ အရောင်ဖျော့လာကာ၏ ပုံမှန်ဥပမာများဖြစ်သည်။
မှောင်မိုက်သောဘီယာများကို လိုချင်သောအရိပ်ရရန် ပိုမိုနက်မှောင်သော malt အချိုးအစားအနည်းငယ်ဖြင့် ဖျော့တော့သော malt သို့မဟုတ် lager malt အခြေခံမှ ချက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။  ကာရာမဲလ်ကဲ့သို့သော အခြားအရောင်အသွေးများကိုလည်း ဘီယာကို မည်းစေရန် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။  ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကဲ့သို့သော အလွန်နက်မှောင်သော ဘီယာများသည် နက်မှောင်သော သို့မဟုတ် ကြာမြင့်စွာကင်ထားသည့် မူပိုင်ခွင့် မောလ်များကို အသုံးပြုပါ။  အချို့က မညက်တညက်ရှိသော မုယောစပါးကို ကင်ကြသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ- ဘီယာတိုင်းတာခြင်း § ခွန်အား
ဘီယာသည် ပမာဏအားဖြင့် (abv) (abv) မှ 3% အောက်အယ်လ်ကိုဟောမှ 14% abv ဝန်းကျင်အထိ ရှိသော်လည်း ဤအစွမ်းသတ္တိကို ရှန်ပိန်တဆေးဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပြီး အအေးခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့် 55% abv မှ 20% ဝန်းကျင်အထိ အားကောင်းနိုင်သည်။  ဘီယာ၏အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုသည် ဒေသန္တရအလေ့အကျင့် သို့မဟုတ် ဘီယာပုံစံအလိုက် ကွဲပြားသည်။  စားသုံးသူအများစုသိကြသည့် အရောင်ဖျော့ဖျော့လေဂါများသည် ပုံမှန် abv 5% နှင့် အကွာအဝေး 4-6% တွင် ကျဆင်းသည်။  British ales ၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အစွမ်းသတ္တိမှာ များစွာနိမ့်ပါးပြီး အများအပြားတွင် 4% abv ဝန်းကျင်ရှိနေသည်။  ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်၊ စားပွဲဘီယာကဲ့သို့သော အချို့ဘီယာများသည် အချို့သောကျောင်းများတွင် အချိုရည်များအစား အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုနည်းသော (1%–4%) ပါဝင်ပါသည်။
ဘီယာထဲတွင် အရက်သည် အဓိကအားဖြင့် အချဉ်ဖောက်ချိန်တွင် ထုတ်ပေးသော သကြားများ၏ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။  wort တွင် အချဉ်ဖောက်နိုင်သော သကြားပမာဏနှင့် wort ကို စော်ဖောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် တဆေးအမျိုးမျိုးသည် နောက်ဆုံးဘီယာတွင် အရက်ပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။  အချဉ်ဖောက်နိုင်သော သကြားများကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု တိုးစေရန်အတွက် မကြာခဏ ပေါင်းထည့်လေ့ရှိပြီး အချို့သော ဘီယာပုံစံများ (အဓိကအားဖြင့် "အလင်း" ဘီယာ) အတွက် အင်ဇိုင်းများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ကစီဓာတ်) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်စေရန် အင်ဇိုင်းများကို wort တွင် ထည့်သွင်းလေ့ရှိသည်။  အရက်သည် တဆေးဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောပါဝင်မှုတွင် တဆေးကို အဆိပ်ဖြစ်စေသည်။  ပုံမှန် ချက်လုပ်ထားသော တဆေးသည် ပမာဏအားဖြင့် အရက်ပြင်းအား 12% အထက်တွင် မရှင်သန်နိုင်ပါ။  အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့် အချဉ်ဖောက်ချိန်နည်းလွန်းခြင်းသည် တဆေး၏ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေပြီး အရက်ပါဝင်မှုကို လျော့ကျစေသည်။
အပျော့စား ဘီယာများမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အယ်လ်ကိုဟော 0.05% ထက်နည်းသော ဘီယာများ ("နီးသောဘီယာ" ဟုလည်း ခေါ်သည်) နှင့် များသောအားဖြင့် 4% အရက်ပါဝင်သည့် အပေါ့စား ဘီယာများ။
20 ရာစုနှောင်းပိုင်းနှစ်များအတွင်း ဘီယာများ၏ အင်အားသည် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။  10.5% abv (33 ဒီဂရီ ပလေတို၊ ထို့ကြောင့် Vetter "33") doppelbock သည် 1994 Guinness Book of World Records တွင် အပြင်းထန်ဆုံးဘီယာအဖြစ် ထိုအချိန်က Samichlaus၊ Swiss ဘီယာချက်လုပ်သူ Hürliman ဖြစ်ခဲ့သော်ငြား၊  ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းများ 14% abv တွင် အပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည်။  ထိုအချိန်မှစ၍ အချို့သော ဘီယာထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ဘီယာ၏အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ရှန်ပိန်တဆေးကို အသုံးပြုလာကြသည်။  Samuel Adams သည် ထောင်စုနှစ်နှင့်အတူ 20% abv သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Utopias ဖြင့် ထိုပမာဏကို 25.6% ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။  ဗြိတိန်တွင် အပြင်းဆုံးဘီယာမှာ 23% abv ဘီယာဖြစ်ပြီး Parish Brewery မှ Baz's Super Brew ဖြစ်သည်။  2011 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စကော့တလန် ဘီယာချက်စက်ရုံ BrewDog မှ Ghost Deer ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး 28% မှာ အချဉ်ဖောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံး ဘီယာဟု ဆိုကြသည်။
အပြင်းထန်ဆုံး ဘီယာဟု ဆိုထားသော ထုတ်ကုန်မှာ Schorschbräu ၏ 2011 Shorschbock 57 57.5% ဖြစ်သည်။  ၎င်းကို 2010 ခုနှစ်တွင် BrewDog မှပြုလုပ်သည့် 55% ဘယ်လ်ဂျီယံ ale၊ The End of History၊ ရှေ့တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အလားတူကုမ္ပဏီသည် ယခင်က Sink The Bismarck!၊ 41% abv IPA နှင့် Tactical Nuclear Penguin၊ 32% abv Imperial တောင့်တင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  Each of these beers are made using the eisbock method of fractional freezing, in whichastrong ale is partially frozen and the ice is repeatedly removed, until the desired strength is reached, a process that may class the product as spirits rather than beer.  The German brewery Schorschbräu's Schorschbock,a31% abv eisbock, and Hair of the Dog's Dave,a29% abv barley wine made in 1994, used the same fractional freezing method.  A 60% abv blend of beer with whiskey was jokingly claimed as the strongest beer byaDutch brewery in July 2010.
Main articles: Draught beer and Cask ale
A selection of cask beers
Draught (also spelled "draft") beer fromapressurised keg usingalever-style dispenser andaspout is the most common method of dispensing in bars around the world. A metal keg is pressurised with carbon dioxide (CO2) gas which drives the beer to the dispensing tap or faucet. Some beers may be served withanitrogen/carbon dioxide mixture. Nitrogen produces fine bubbles, resulting inadense head andacreamy mouthfeel. Some types of beer can also be found in smaller, disposable kegs called beer balls. In traditional pubs, the pull levers for major beer brands may include the beer's logo and trademark.
In the 1980s, Guinness introduced the beer widget,anitrogen-pressurised ball insideacan which createsadense, tight head, similar to beer served fromanitrogen system. The words draft and draught can be used as marketing terms to describe canned or bottled beers containingabeer widget, or which are cold-filtered rather than pasteurised.
Cask-conditioned ales (or cask ales) are unfiltered and unpasteurised beers. These beers are termed "real ale" by the CAMRA organisation. Typically, whenacask arrives inapub, it is placed horizontally onaframe calleda"stillage" which is designed to hold it steady and at the right angle, and then allowed to cool to cellar temperature (typically between 11–13 °C or 52–55 °F), before being tapped and vented—a tap is driven througha(usually rubber) bung at the bottom of one end, andahard spile or other implement is used to openahole in the side of the cask, which is now uppermost. The act of stillaging and then ventingabeer in this manner typically disturbs all the sediment, so it must be left forasuitable period to "drop" (clear) again, as well as to fully condition—this period can take anywhere from several hours to several days. At this point the beer is ready to sell, either being pulled throughabeer line withahand pump, or simply being "gravity-fed" directly into the glass.
Draught beer's environmental impact can be 68% lower than bottled beer due to packaging differences. A life cycle study of one beer brand, including grain production, brewing, bottling, distribution and waste management, shows that the CO2 emissions froma6-pack of micro-brew beer is about3kilograms (6.6 pounds). The loss of natural habitat potential from the 6-pack of micro-brew beer is estimated to be 2.5 square metres (26 square feet). Downstream emissions from distribution, retail, storage and disposal of waste can be over 45% ofabottled micro-brew beer's CO2 emissions. Where legal, the use ofarefillable jug, reusable bottle or other reusable containers to transport draught beer fromastore orabar, rather than buying pre-bottled beer, can reduce the environmental impact of beer consumption.
Main articles: Beer bottle and Drink can
Most beers are cleared of yeast by filtering when packaged in bottles and cans. However, bottle conditioned beers retain some yeast—either by being unfiltered, or by being filtered and then reseeded with fresh yeast. It is usually recommended that the beer be poured slowly, leaving any yeast sediment at the bottom of the bottle. However, some drinkers prefer to pour in the yeast; this practice is customary with wheat beers. Typically, when serving a hefeweizen wheat beer, 90% of the contents are poured, and the remainder is swirled to suspend the sediment before pouring it into the glass. Alternatively, the bottle may be inverted prior to opening. Glass bottles are always used for bottle conditioned beers.
Many beers are sold in cans, though there is considerable variation in the proportion between different countries. In Sweden in 2001, 63.9% of beer was sold in cans. People either drink from the can or pour the beer intoaglass. A technology developed by Crown Holdings for the 2010 FIFA World Cup is the 'full aperture' can, so named because the entire lid is removed during the opening process, turning the can intoadrinking cup. Cans protect the beer from light (thereby preventing "skunked" beer) and haveaseal less prone to leaking over time than bottles. Cans were initially viewed asatechnological breakthrough for maintaining the quality ofabeer, then became commonly associated with less expensive, mass-produced beers, even though the quality of storage in cans is much like bottles. Plastic (PET) bottles are used by some breweries.
The temperature ofabeer has an influence onadrinker's experience; warmer temperatures reveal the range of flavours inabeer but cooler temperatures are more refreshing. Most drinkers prefer pale lager to be served chilled,alow- or medium-strength pale ale to be served cool, whileastrong barley wine or imperial stout to be served at room temperature.
Beer writer Michael Jackson proposedafive-level scale for serving temperatures: well chilled (7 °C or 45 °F) for "light" beers (pale lagers); chilled (8 °C or 46 °F) for Berliner Weisse and other wheat beers; lightly chilled (9 °C or 48 °F) for all dark lagers, altbier and German wheat beers; cellar temperature (13 °C or 55 °F) for regular British ale, stout and most Belgian specialities; and room temperature (15.5 °C or 60 °F) for strong dark ales (especially trappist beer) and barley wine.
Drinking chilled beer began with the development of artificial refrigeration and by the 1870s, was spread in those countries that concentrated on brewing pale lager. Chilling beer makes it more refreshing, though below 15.5 °C (60 °F) the chilling starts to reduce taste awareness and reduces it significantly below 10 °C (50 °F). Beer served unchilled—either cool or at room temperature—reveal more of their flavours. Cask Marque,anon-profit UK beer organisation, has setatemperature standard range of 12°–14 °C (53°–57 °F) for cask ales to be served.
Main article: Beer glassware
Beer is consumed out ofavariety of vessels, such asaglass, a beer stein,amug, a pewter tankard,abeer bottle oracan; or at music festivals and some bars and nightclubs, fromaplastic cup. The shape of the glass from which beer is consumed can influence the perception of the beer and can define and accent the character of the style. Breweries offer branded glassware intended only for their own beers asamarketing promotion, as this increases sales of their product.
The pouring process has an influence onabeer's presentation. The rate of flow from the tap or other serving vessel, tilt of the glass, and position of the pour (in the centre or down the side) into the glass all influence the result, such as the size and longevity of the head, lacing (the pattern left by the head as it moves down the glass as the beer is drunk), and the release of carbonation. A beer tower isabeer dispensing device, usually found in bars and pubs, that consists ofacylinder attached toabeer cooling device at the bottom. Beer is dispensed from the beer tower intoadrinking vessel.
See also: Short-term effects of alcohol consumption and Long-term effects of alcohol consumption
A 2016 systematic review and meta-analysis found that moderate ethanol consumption brought no mortality benefit compared with lifetime abstention from ethanol consumption. Some studies have concluded that drinking small quantities of alcohol (less than one drink in women and two in men, per day) is associated with a decreased risk of heart disease, stroke, diabetes mellitus, and early death. Some of these studies combined former ethanol drinkers and lifelong abstainers intoasingle group of nondrinkers, which hides the health benefits of lifelong abstention from ethanol. The long-term health effects of continuous, moderate or heavy alcohol consumption include the risk of developing alcoholism and alcoholic liver disease. Alcoholism, also known as "alcohol use disorder", isabroad term for any drinking of alcohol that results in problems. It was previously divided into two types: alcohol abuse and alcohol dependence. Inamedical context, alcoholism is said to exist when two or more of the following conditions is present:aperson drinks large amounts overalong time period, has difficulty cutting down, acquiring and drinking alcohol takes upagreat deal of time, alcohol is strongly desired, usage results in not fulfilling responsibilities, usage results in social problems, usage results in health problems, usage results in risky situations, withdrawal occurs when stopping, and alcohol tolerance has occurred with use. Alcoholism reducesaperson's life expectancy by around ten years and alcohol use is the third leading cause of early death in the United States. No professional medical association recommends that people who are nondrinkers should start drinking alcoholic beverages. A total of 3.3 million deaths (5.9% of all deaths) are believed to be due to alcohol.
It is considered that overeating and lack of muscle tone is the main cause of a beer belly, rather than beer consumption. A 2004 study, however, foundalink between binge drinking andabeer belly. But with most overconsumption, it is moreaproblem of improper exercise and overconsumption of carbohydrates than the product itself. Several diet books quote beer as having an undesirably high glycemic index of 110, the same as maltose; however, the maltose in beer undergoes metabolism by yeast during fermentation so that beer consists mostly of water, hop oils and only trace amounts of sugars, including maltose.
Beers vary in their nutritional content. The ingredients used to make beer, including the yeast, providearich source of nutrients; therefore beer may contain nutrients including magnesium, selenium, potassium, phosphorus, biotin, chromium and B vitamins. Beer is sometimes referred to as "liquid bread", though beer is notameal in itself.
(serving size: 12 oz./355 ml) Beer Brand  Carbohydrate
(kcal)  Budweiser Select 55    1.8 2.4   55 Coors Light    5 4.2 102 Guinness Draught  10 4.0 126 Sierra Nevada Bigfoot  30.3 9.6 330
See also: Category:Beer culture
A tent at Munich's Oktoberfest in Germany. The event is known as the world's largest beer festival.Beer culture in Cameroon. A friendship drink of millet beer at the market, Mogode, Cameroon, 1998.
In many societies, beer is the most popular alcoholic drink. Various social traditions and activities are associated with beer drinking, such as playing cards, darts, or other pub games; attending beer festivals; engaging in zythology (the study of beer); visiting a series of pubs in one evening; visiting breweries; beer-oriented tourism; or rating beer. Drinking games, such as beer pong, are also popular. A relatively new profession is that of the beer sommelier, who informs restaurant patrons about beers and food pairings.
Beer is considered to be a social lubricant in many societies and is consumed in countries all over the world. There are breweries in Middle Eastern countries such as Syria, and in some African countries. Sales of beer are four times those of wine, which is the second most popular alcoholic drink.
A study published in the Neuropsychopharmacology journal in 2013 revealed the finding that the flavour of beer alone could provoke dopamine activity in the brain of the male participants, who wanted to drink more asaresult. The 49 men in the study were subject to positron emission tomography scans, whileacomputer-controlled device sprayed minute amounts of beer, water and a sports drink onto their tongues. Compared with the taste of the sports drink, the taste of beer significantly increased the participants desire to drink. Test results indicated that the flavour of the beer triggered a dopamine release, even though alcohol content in the spray was insufficient for the purpose of becoming intoxicated.
Some breweries have developed beers to pair with food. Wine writer Malcolm Gluck disputed the need to pair beer with food, while beer writers Roger Protz and Melissa Cole contested that claim.
See also: Category:Types of beer
Around the world, there are many traditional and ancient starch-based drinks classed as beer. In Africa, there are various ethnic beers made from sorghum or millet, such as Oshikundu in Namibia and Tella in Ethiopia. Kyrgyzstan also hasabeer made from millet; it isalow alcohol, somewhat porridge-like drink called "Bozo". Bhutan, Nepal, Tibet and Sikkim also use millet in Chhaang,apopular semi-fermented rice/millet drink in the eastern Himalayas. Further east in China are found Huangjiu and Choujiu—traditional rice-based drinks related to beer.
The Andes in South America has Chicha, made from germinated maize (corn); while the indigenous peoples in Brazil have Cauim,atraditional drink made since pre-Columbian times by chewing manioc so that an enzyme (amylase) present in human saliva can break down the starch into fermentable sugars; this is similar to Masato in Peru.
Some beers which are made from bread, which is linked to the earliest forms of beer, are Sahti in Finland, Kvass in Russia and Ukraine, and Bouza in Sudan. 4000 years ago fermented bread was used in Mesopotamia. Food waste activists got inspired by this ancient recipes and use leftover bread to replaceathird of the malted barley that would otherwise be used for brewing their craft ale.
Main article: Beer chemistry
Beer contains the phenolic acids 4-hydroxyphenylacetic acid, vanillic acid, caffeic acid, syringic acid, p-coumaric acid, ferulic acid, and sinapic acid. Alkaline hydrolysis experiments show that most of the phenolic acids are present as bound forms and onlyasmall portion can be detected as free compounds. Hops, and beer made with it, contain 8-prenylnaringenin which isapotent phytoestrogen. Hop also contains myrcene, humulene, xanthohumol, isoxanthohumol, myrcenol, linalool, tannins, and resin. The alcohol 2M2B isacomponent of hops brewing.
Barley, in the form of malt, brings the condensed tannins prodelphinidins B3, B9 and C2 into beer. Tryptophol, tyrosol, and phenylethanol are aromatic higher alcohols found in beer as secondary products of alcoholic fermentation (products also known as congeners) by Saccharomyces cerevisiae.
Discuss improvements to this article
The Malt Shovel Brewery is an Australian brewery owned by Lion, which in turn isasubsidiary of the Japanese conglomerate Kirin. It is located in Camperdown, New South Wales. Malt Shovel is best known for its James Squire range of beers. The beer is named after the convict turned Australia's first brewer James Squire, who also went on to grow Australia's first hops and is said to have created Australia's first commercial brewery.
အကြောင်းအရာကို CC BY-SA 3.0 အောက်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘီယာသည် ကမ္ဘာတွင် ရှေးအကျဆုံး အဖျော်ယမကာ ဖြစ်ပြီး ဘီယာကို ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၉၅၀၀ လောက်က လယ်ထဲက ကောက်နှံပင် ကနေ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဓာတုဗေဒ သက်သေခံကို ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၃၁၀၀ လောက်မှ တွေ့ရှိခဲ့သည် ဆိုသည်။ ယနေ့တွင် ဘီယာထုတ်လုပ်ရေးကို စီးပွားရေး တစ်ခုအနေ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေကြသည်။၂၀၀၆ ခုနှစ် မှာ တစ်နှစ် ဘီယာ ရောင်းရနှုန်း အရေအတွက်သည် လီတာ သန်းပေါင်း ၁၃၃ သန်း (ဂါလံ သန်းပေါင်း ၃၅)ထိ ရောင်းချခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ဤအကြောင်းကို အထောက်တော် ဦးရွှေတိုး (နောင် တောင်ထားဝယ်ဗိုလ် ဖြစ်လာသူ)၏ တင်လျှောက်ချက်အရ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး၏ ရွှေနားတော်အထိ ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းတရား ခေါ်ယူစစ်ဆေးတော်မူရာတွင် ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်သည် မကွယ်မထောင့် ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဖြောင့်ဆိုသည်။
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက "'မောင်မင်းလျှောက်တင်သော စကားသည် မောင်မင်းကဲ့သို့သော ပညာရှိများ အတွက်မူ ဟုတ်မှန်တန်ရာပါသည်။ သို့သော် တိုင်းသူပြည်သား၊ အများကမူ မောင်မင်းကဲ့သို့ ပညာရှိများ မဟုတ်ကြသောကြောင့် မောင်မင်း၏စကားကို လိုရာဆွဲပြီး အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကာ သောက်စားမူးယစ်နေကြလျှင် မခက်ပေလော"' ဟု အမိန့်တော်ရှိပြီးနောက် ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်အား ရာထူးချထားခဲ့သည်။ 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီယာ&oldid=739033" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၈:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။